တင်​မိတင်​ရာ — Steemit
minnkhant261 (41)in #esteem •4years ago
Myo Min Aung:
MSO Member များအတွက် သတင်းကောင်း
အခုပြန်ကြားရသလောက် ကိုယ့်အောက်ကလူကို ပြန်သင်ပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသူများပါတယ်။ အလုပ်တဘက်နဲ့ အချိန်မပေးနိုင်ကြတာလဲပါတယ်။ group ထဲက ၅ယောက်တယောက်နဲ့တယောက် အားလပ်ချိန်မတူကြတော့ တိုင်တွေပတ်နေကြရော။
vote ရမယ့် link သာချပေး နေ့တိုင်း vote ပေးမယ်ဆိုသူများပါတယ်။
ဘယ်သူက ဘယ်အကောင့်တွေကို နေ့စဉ် vote ပေးရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ကနေပဲ Member တိုင်းကိုတခါတည်းတွဲပေးလိုက်ပါတော့မယ်။ ကိုယ့်အောက် ၄ယောက်လည်းလာမချိတ်တော့ဘဲ အဲ့လူသစ်တွေကို တခါတည်း vote ရမယ့် account တွေပေးလိုက်ပါမယ်။
အခုကျွန်တော်ထပ်မံစမ်းသပ်ချက်အရ အကောင့်တခုကို 11votes ထိသုံးလို့ရပါတယ်။
Voting Power 100% ကနေ 11votes ပေးပြီးရင် Voting Power 80.27% ကျန်ပါသေးတယ်။ 24hr ကြာရင် 20% ပြန်တက်မှာဆိုတော့ ဒီနေ့ vote ပေးခဲ့အချိန်အတိုင်း နောက်တရက်ဆိုရင် 100% ပြန်ပြည့်နေပါပြီ။
သေချာအောင် www.steemworld.org/@username (username နေရာမိမိစာထည့်ပါ) စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ 100% ပြည့်ရင် 11votes ပြည့်အောင်လိုက်ပေးပါ။
ဒါဆို အောက်သူတွေကို သင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကပဲ လူသစ်ဝင်လာတာနဲ့ သူ vote ရမယ့် account တွေတခါတည်းပေးလိုက်ပါမယ်။
Member တွေနေ့စဉ်လုပ်ရမှာက post 1ခုအနည်းဆုံးတင်ပါ။ တခြားအကောင့် 11ခုကို 1vote စီ 11votes ပြည့်အောင်ပေးပါ။
အခုလုပ်နေကျအတိုင်းဆက်လုပ်နေပါ။ ကျွန်တော် Member တိုင်းကို Messenger ကနေ သင်တို့ vote ရမယ့် Account link တွေလာပေးပါမယ်။
vote ပေးရင် $ ဘယ်လိုပြန်ရတာလဲဆိုရင် Post တခုကို vote ပေးခါနီးကြည့်လိုက်ပါ။ တင်ထားတာ 7ရက်မကျော်သေးရင် အဲ့ Post မှာ ဘယ်လောက် $ တက်နေလဲကြည့်ပါ။ ထို $ ကို 75% နဲ့ 25% ၂ပုံပုံပြီး 75% က post တင်သူရပါမယ်။ 25% ကို vote လာပေးထားသူတွေကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Steem Power အချိုးအစားအလိုက်ခွဲယူကြရပါတယ်။
$ အနေနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘဲ Steem Power အနေနဲ့ရမှာပါ။ ဒါဆို vote တွေပေးရင်း ကိုယ့် steem account ရဲ့ steem power တက်လာလေလေ 25% ကိုခွဲယူတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုရလေပါပဲ။ Steem Power တွေကို စုစုသွားပြီး များလာတဲ့အခါ ကိုယ်လိုက်ပေးရတဲ့ vote တချက်ဟာလည်း $ များများတန်လာပါမယ်။ vote ပေးလိုက်လို့ post မှာတက်သွားတဲ့ $ ထဲက 25% ကို vote ပေးသူတွေပြန်ခွဲယူတဲ့အခါလည်း ကိုယ်ပိုရပါတယ်။
Steem Power ကို $ ပြန်ထုတ်လို့လဲရပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Steem Power ကို 13 နဲ့စားပြီး 13 ပတ်ခွဲပြီး ထုတ်လို့ရပါတယ်။
Post ကိုလည်းမပျက်မကွက်တင်ပေးကြပါ။ ဒါမှသူများလာပေးတဲ့ vote တွေရမှာပါ။ post မှာတက်လာတဲ့ $ ထဲက 75% ကိုယ်ရမှာပါ။
Post တင်သူရော vote ပေးသူပါ ၂ဦးလုံးအကျိုးရှိပါတယ်။ ရထားတဲ့ $ တွေ SP တွေကို post ပြီး 7ရက်မြောက်နေ့မှာ ကိုယ့် Steem Wallet ထဲဝင်လာပါမယ်။ Wallet ထဲဝင်ကြည့်ရင် အပေါ်ထိပ်နားမှာ Claim Reward ဆိုပြီး နိုပ်ယူဖို့ခလုတ်တခုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် Facebook သုံးမယ့်အချိန်ထဲက ဖဲ့ပြီး post တင် vote ပေးလုပ်သွားကြရင် တဖြည်းဖြည်း ဖုန်းဘေဖိုးရလာပါမယ်။ နောက်ပိုင်း ထမင်းဖိုးပါရလာပါလိမ့်မယ်။
Steemit Account ဖွင့်ခြင်း
MSO No. မရသေးသူလူသစ်များ (Messenger) join ပါ
Member Form တင်ရန်
MSO No. ရှိပြီးသူများ (Messenger) join ပါ
MSO Facebook Group
4 years ago in #esteem by minnkhant261 (41)